editor — Sun, 10/30/2016 - 15:54
पुस्तक लेख्ने र प्रकाशमा ल्याउने धेरै हुन सक्छन् । तर, अमरत्व प्राप्त गर्ने लेखक र कृति थोरै हुन्छन् । जसको लेखनले पाठकलाई साहित्य रसास्वादन गराउन सक्यो वा ज्ञानको सागरमा डुबुल्की लगाउन वाध्य पार्यो, उसकै कृतिको नाम चर्चामा आउँछ । उसले नै समाजको मनलाई अपहरण गर्न सक्छ । त्यस्तै हाराहारी शक्ति र सामर्थ्य बोकेर देखापरेको कृति हो– ‘अक्षर’ ।
देशविदेशका ज्ञानविज्ञानलाई ‘अक्षर’मा रूपान्तरण गर्ने लेखक/सङ्कलक/सम्पादक हुनुहुन्छ– तेजनारायण शेर्पा ‘रञ्जन’ । सद्य कृति ‘अक्षर’मा धर्म, साहित्य कला, संस्कृति, दर्शन, जडिबुटी विज्ञान, राननीति, ज्योतिषशास्त्र, तन्त्रशास्त्र आदि थुप्रै क्षेत्रका जीवनोपयोगी कुराहरू समेटिएका छन् ।
editor — Sat, 10/29/2016 - 02:19
विष्णुबहादुर सिह जुकेना –६ अर्धाखाँचीमा २५अगस्त १९५२ जन्म भै हाल बुढा निलकण्ठ –१० मण्डिखाटार, काठमाडौमा बसोबास गर्दै आउनु भएका एउटा मूद्र्धन्य साहित्यकार हुन् । जनमैत्री विश्वविद्यालय, मास्को, रुसबाट (सन्१९८०)मा एम.ईं सिभिल (हाइड्रो पावर) शिक्षा हाँसिल गरेका सिंहजीले पोखरा विश्वविद्यालय (सन् २००३)बाट एम एससी वातावरण व्यवस्थापन समेत दोस्रो डिग्री हाँसिल गर्नुभएको छ । विष्णुबहादुर सिंह पेशाले एउटा विद्युत् इन्जिनियर हुन् ।
editor — Sun, 10/16/2016 - 06:14
विश्वप्रेम अधिकारीको जन्म वि.सं २००३ सालमा राङखोला स्याङ्जामा भएको थियो । उहाँका पिताको नाम रूग्मागद र माताको नाम लीला अधिकारी हो । शिक्षाको थालनी आफ्नै घरमा प्रारम्भ गरे पनि उच्च शिक्षाको लागि भने उहाँ काशी जानु भयो र अध्ययनको साथसाथै साहित्यिक क्षेत्रमा आफूलाई उभ्याउन पनि उहाँ सफल हुनुभयो । विश्वप्रेमको साहित्यिक यात्राको इतिहासलाई केलाउँदा अच्युतशरण अर्यालले लेखेको 'कवि र कविता' शीर्षकलाई (पृष्ठ ग देखि ङ)अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
editor — Sun, 10/09/2016 - 00:00
‘मान्छे हराएको देश’ कविता सङ्ग्रहका कृतिकार हुनुहुन्छ कृष्ण पहारी । पिता स्व. केशवराज पहारी र माता स्व. विष्णुकुमारीको पुत्ररत्नको रूपमा २०१३ साल जेष्ठ बाइस गते पोखराथोक –२, अमराई पाल्पामा जन्मनु भएका पहारी पेशाले एउटा स्वास्थकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँले २०६२ सालमा बारुदका धुवाँहरू गजलसङ्ग्रह, परिवेशभित्रका पीडाहरू, मुक्तकसङ्ग्रह (२०६५) र ‘मान्छे हराएको देश’ कवितासङ्ग्रह (२०७२) गरी तीन कृतिहरू हामीलाई प्रदान गरिसक्नुभएको छ ।
nandalal.acharya — Tue, 10/04/2016 - 16:34
देश गणतन्त्रमय भएको थियो । जनयुद्ध थान्कामा लागेको थियो । तराई/मधेश पनि शान्तिको श्वास फेर्दै थियो । बोर्डिङ स्कुले शिक्षण जीवनबाट वाक्कदिक्क भइएको थियो । देशमा जे आए पनि र आउन खोजे पनि त्यसको सुवास जनतासम्म पुग्नु भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैँ नै थियो । मैले भने कुनै परिवर्तन महसुस गरिरहेको थिइनँ । माथिल्लो आसनको अनुहार परिवर्तन थियो । घरदेखि दरबारसम्म कुर्सीमोह उस्तै थियो । कामधामको तौरतरिका फरक थियो ।
editor — Fri, 09/30/2016 - 17:24
विष्णुबहादुर सिह एउटा मूर्धन्य साहित्यकार हुन् उनका धेरै कृतिहरू बजारमा आएका छन् । पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानको यही भाद्र १० गते साहित्यिक कार्यक्रममा विष्णुबहादुर सिंहबाट ‘सम्झनाका झिल्काहरू’ उपहार स्वरूप प्राप्त गरें । यो विष्णुजीको बाइसौं स्मरणसङ्ग्रह हो । विष्णुबहादुर सिंहको साहित्यिक कलम नियात्रामा मात्र सीमित छैन । उन्ले संस्मरण, हाइकु, ताङ्का, गीत गजल, कविता, लघुकथा, मुक्तक, चोका र सिजो लेखनमा समेत हात चलाउँदै आएका छन् । सिंहजीको यो सम्झनाको भिल्कोको अध्यनले के प्रष्ट पार्द छ भने उनी एउटा सिद्धहस्त साहित्यकार मात्र नभै कर्तव्यनिष्ठ विद्युत इञ्जिनियर पनि हुन् ।
editor — Mon, 09/12/2016 - 01:41
कलानाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले यही भाद्र ९गते चितवन साहित्य परिषद नरायणगढको हलमा भव्य साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कलानाथ अधिकारीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा सम्पर्कका केही व्यक्तिहरूलाई अभिनन्दन गरिएको थियो । गीतकार तथा साहित्यकार प्रेम विनोद नन्दन, जगत श्रोष्ठ यमुनाप्रसाद न्यौपाने, हरिबहादुर ढुङ्गाना, दीपक सोती, गायत्री श्रेष्ठ र सरसोती रिजाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।
editor — Sun, 09/04/2016 - 20:09
‘एउटा अदृश्य मन’ गजलसङ्ग्रहकी गजलकार निशाक्षेत्रीको कृति प्राप्त भएको लामो समय भए पनि अध्ययन गर्ने समय मिलेको थिएन आज पढ्न पनि पाएँ र केही लेख्न पनि मन लाग्यो । २०२५ सालमा इलाम नेपालटारमा जन्मेर, झापा, घैलाडुब्बा, लक्ष्मीपुर–९मा स्थायी बसोबार गर्र्दै हाल इजरायलमा रोजगारीको सिलसिलामा पुगेकी निशा क्षेत्रीले नेपाली गजल समुद्रमा गजल कृति थप्नु भनेको प्रशंसनीय काम हो । उनका गजलहरू संयुक्तरूपमा २०७१बाट प्रकाशनमा आएका छन् भने ‘एउटा अदृश्य मन’(२०७२) भने उनको एकल कृति हो । कृति प्रकाशनको हिसावले उन्को यो पहिलो कृति हो । हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान, चितवन, नेपालकी विशिष्ट आजीवन सदस्य र यही कृति नै निशाको र मेरो बीचको परिचय पनि हो । आवरण पृष्ठ सहित यस कृतिको संरचना ६६ पृष्ठ छ ।
editor — Sat, 08/27/2016 - 18:56
माधुरी शब्दले मिठास, मधुरस र रक्सी भन्ने अर्थ लगाउँछ । नव माधुरीभन्दा नयाँ मिठास भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ । जे होस् नव माधुरीले नयाँ मिठास चखाउने काममा यसलाई अर्थ्याउँदा अनर्थ नलाग्ला भन्ने ठान्दै यसै नव माधुरीको बारे केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु । नव माधुरी पर्वत जिल्लाबाट प्रकाशित गरिने पत्रिका हो । यस पत्रिकाको काम यथा नाम तथा गुण भने जस्तै नयाँ नयाँ अङ्क मार्फत पाठक वर्गमा मधुरस पान गराउँछ र आनन्दको अनुभूति दिलाउँछ ।
मनमनको गुनगुनको शैल्यक्रिया
editor — Sun, 08/14/2016 - 17:52
लामो समयसम्म सरकारी जागीरमा जीवन बिताउनु भएका कविवर श्रीचिरञ्जीवी सिग्देलजी एउटा साहित्यमा रुची राख्ने सरल स्वभाव, साधा जीवन तर उच्च विचारको धनी मित्र हुनुहुन्छ । जागिरे जीवनबाट अनिवार्य अवकाश पाए पछि २०६९साल कार्तिक २८ गते पूर्व र बहालवाला कर्मचारीहरूलाई जमघट गराएर लक्ष्मी जयन्ती मनाउने र नवलपरासी जिल्लामा एउटा साहित्यिक संस्थाको स्थापना गर्ने भनी मलाई बोलावट भयो । उक्त अवसरमा उहाँको यो कृति मैले प्राप्त गरेको थिएँ । हाल उहाँ साहित्यिक कार्यक्रममा सकृयरूपमा लाग्नुभएको छ ।
‘गरुराहा’ उपन्यासको मुख्य रचनागर्भ
editor — Sun, 08/14/2016 - 01:58
विहान सबेरैदेखि कर्मपथमा जुट्नु, दिउसो केही घण्टा विश्रामको श्वास फेर्नु, साँझतिर कलेजहरू धाउनु र वातावरण अँध्यारिँदै गएपछि तरकारी हटिया छिर्नु मेरो दैनन्दिन थियो । मेरो चिनजानको संसार सानो थियो । पढेर र सुनेर चिनेकाहरू त मनग्यै थिए । दोहोरो चिनजानका चाहिँ औंलामा गन्न सक्ने जति मात्र थिए ।
editor — Sun, 08/07/2016 - 14:44
रामेछापमा जन्मेर रामेछाप मै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर कविता लेख्ने अँझ त्यसमा पनि झ्याउरे छन्दमा कविता लेख्ने कविहरूमा उद्धव आचार्य अविचलको नाम अघिल्लो लहरमा आउँछ । यिनले विगत्मा कक्षा ८ अध्ययन गर्दाताका नै मन्थली उमाविमा सम्पन्न भएका विभिन्न कविता प्रतियोगिताहरूमा उच्च र अब्बल स्थान ल्याएर कवितात्मक ह्याट्रिक हानिसकेका हुन् । सो क्रमलाई अविचल गतिमा अघि बढाउँदै अविचलले यतिखेरसम्म हाम्रासामु तीनवटा काव्यहरू पस्किसकेका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा उनको काव्यगत् चिनारीको मेसोको उद्घाटन गर्न खोजिएको हो । यो क्रम भविष्यका दिनहरूमा पनि क्रमिक रुपले जारी रहनेछ ।
ए मन !
घरि घरि तिमीले मलाई बिर्सिएको
दसैं, ब्याज र नरपिसाचहरू